रामरहिमकी हनिप्रित नेपालमा ? - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
भारतमा चलचित्रदेखि कन्सर्टसम्म, सामाजिक कार्यदेखि धार्मिक अनुष्ठानसम्म जताततै राजसी ठाँटमा देखिन्थे बाबा गुरमित रामरहिम सिंह । जहाँ–जहाँ बाबा पुग्थे, त्यहीँ–त्यहीँ छायाँसरह पुगेकी हुन्थिन्, एउटी ग्ल्यामरस युवती, जसलाई ती बाबा आफ्नी धर्मपुत्री बताउँथे । करोडौं अनुयायी भएको डेरा सच्चा सौदाका प्रमुख बाबा रामरहिम यतिबेला बलात्कारको अभियोगमा २० वर्षका लागि जेल पुगेका छन् ।
बाबा जेल चलान भएको दिन पनि रहस्यमय सुन्दरी हनिप्रित इन्सान विशेष चर्चामा आइन् । कारण उनी बाबासँगै जेलसम्म पुगिनन् मात्र, उनले बाबासँगै जेलमै बस्ने इच्छासमेत व्यक्त गरिन् । सीबीआई कोर्टबाट बाबालाई जेल लगिएको सरकारी हेलिकप्टरमा पनि हनिप्रित रातो ब्याग लिएर बाबासँगै थिइन् । त्यतिमात्र होइन, तिनै सुन्दरीले बाबालाई प्रहरी कब्जाबाट भगाउने योजना बनाएको आरोप हरियाणा प्रहरीको छ ।
बलात्कारी बाबा रामरहिमको अर्बौंको साम्राज्य डेरा सच्चा सौदाको उत्तराधिकारीका रूपमा समेत चर्चामा ल्याइएकी तिनै हनिप्रित यतिबेला गायब छिन् ।
अझ रोचक त के छ भने डेरा सच्चा सौदाको अर्बौको साम्राज्यको कमाण्ड सम्हाल्ने अनुमानबीच बाबा रामरहिम जेल परेकै दिनदेखि यी कथित उत्तराधिकारी अचानक हराइन्, जसको सुराक प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन । आखिर किन अन्डरग्राउन्ड भइन् हनिप्रित ? हनिप्रित अन्डरग्राउन्ड हुनुको कारण रामरहिमलाई जेल लाने क्रममा हिंसा भड्काएर भगाउने योजना नै भएको बताइँदैछ । त्यही षड्यन्त्रका कारण प्रहरीले हनिप्रितको खोजी गरिरहेको छ । यसैगरी, बाबा रामरहिमसँगको उनको विवादास्पद सम्बन्ध पनि हनिप्रित गायब हुनुको अर्को कारण मानिएको छ जुन व्यक्तिगत हो आपराधिक कर्म होइन । प्रहरीमा उनीविरुद्ध कुनै उजुरी परेको औपचारिक जानकारी कसैसँग छैन भने उनको प्रमाणित अपराध पनि हालसम्म सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।
हनिप्रित अन्डरग्राउन्ड भएपछि विदेश भाग्ने आशंकामा भारतीय प्रहरीले उनीमाथि ‘लुकआउट नोटिस’ जारी गरेको छ । लुकआउट नोटिस जारी भएपछि हनिप्रितलाई विदेश भाग्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । त्यसैले खुल्ला बोर्डरको फाइदा उठाउँदै उनी नेपाल पसेको आशंका हरियाणा प्रहरीले गरेको छ । भारतीय समाचार संस्थाहरूले उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरीक्षेत्र निकै घना जंगलले नेपालसँग जोडिएकाले त्यही बाटो भएर हनिप्रित नेपाल प्रवेश गरेको आशंका गरेका छन् । उनी गाडीमा बसेर नेपाल भाग्ने योजनाअनुसार लखिमपुर पुगेको दाबा भारतीय टेलिभिजन एबीपी न्युजले गरेको छ । प्रहरीले भने अहिलेसम्म खासै ठोस सूचना हात पार्न सकेको छैन् ।
त्यसो भए के हनिप्रित नेपाल प्रवेश गरिसकेकी छिन् ? लखिमपुर जंगल हुँदै हनिप्रित नेपाल पसेको हुन सक्ने आशंकाका आधारमा हरियाणा प्रहरीले लखिमपुर प्रहरीलाई हनिप्रितका सम्बन्धमा अलर्ट समेत गरेको छ ।
लखिमपुरको जंगलमा हनिप्रितलाई लक्षित गर्दै सर्च अप्रेसन सञ् चालन गरिएको भारतीय टेलिभिजन एबीपी न्युजले जनाएको छ । दैनिक जागरणले आफ्नो समाचारमा जनाएअनुसार हरियाणा प्रहरीका दुई अफिसर सोमबार नेपालसँग जोडिएको नाका गौरीफन्टा पुगेका थिए । गौरीफन्टाको बोर्डर पुलिससँग ती अधिकारीहरूले हनिप्रित नेपाल भाग्न सक्ने सूचना र आशंकाका बारेमा ब्रिफिङ गरे । यद्यपि नेपाल पसेको कुनै सुराक फेला नपरेपछि ती दुवै प्रहरी अधिकारी त्यत्तिकै फर्किएका थिए । सीमामा शंकास्पद पन्जाबी नम्बरको बेवारिसे गाडी भने फेला परेको बताइन्छ, तर उक्त गाडीको हनिप्रितसँगको कनेक्सनका विषयमा भने प्रहरीले कुनै तथ्य हात पार्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिमको तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर उत्तराञ्चल र उत्तरप्रदेशका लखिमपुरलगायतका ठाउँसँग जोडिएका छन् । लखिमपुरको दुधवा नेसनल पार्कको घना जंगल कैलालीको धनगढी, सुडा, फूलबारी, पवेरा, रतनपुर, लालबोझी आदि स्थानसँग जोडिन्छन् । उक्त क्षेत्रमा स्थानीय गाउँहरू वारिपारिका रूपमा जोडिएकाले लखीमपुरबाट नेपाली बस्तीमा पसेर लुक्न खासै गाह्रो छैन । हनिप्रित नेपाल छिरे उनले कञ्चनपुरको बेलौरी, गौरीफन्टा, आनन्दबजार, हसुलिया आदि दुई दर्जन नाकामध्ये कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्छिन् ।
भारतीय प्रहरीले यही आशंकाका आधारमा लखिमपुरको खिरी जंगलमा सर्च अभियान तीव्र पारिएको जनाइएको थियो । ‘हरियाणा पुलिसका एक सब इन्स्पेक्टर र कन्स्टेबल आएका थिए,’ लखिमपुर खिरीका इन्स्पेक्टर केसी मिश्राले एबीपी न्युजलाई भनेका छन्, ‘हनिप्रितका सम्बन्धमा जानकारी लिन, कतै उनी यो बाटो भएर नेपाल त गइनन् ?’ उनले एक शंकास्पद गाडीमाथि पनि भारतीय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र उक्त गाडीको मालिक पत्ता लागिसकेको जानकारी दिएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय निकायका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले भने – भारतिय प्रहरीले हनीप्रितको नेपाल प्रवेश गरेको बारेमा कुनै खबर गरेको छैन ।
गुरमित रामरहिमको सम्पत्ति लिएर हनिप्रित नेपाल पस्ने र त्यहीबाट तेस्रो मुलुक फरार हुने आशंका भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको छ । बाबा र हनिप्रितको सम्बन्धलाई लिएर अहिले भारतमा विभिन्न प्रश्न
उठ्नुका साथै विभिन्न आशंका पनि बाहिर आउन थालेका छन् । रामरहिम जेलमा तड्पिरहेका बेला हनिप्रित गायब हुनुले समेत धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।
अर्का थरी भारतीय मिडियाले भने उनी मायानगरी मुम्बईको बाटो हुँदै सात समुद्रपारि पुगिसकेको अनुमान गरेका छन् । यद्यपि लुकआउट नोटिसका कारण यो विकल्प असहज भएकाले उनी लखिमपुर खिरीको जंगल हुँदै नेपाल पसेको कुरा बढी विश्वसनीय लाग्छ । हनिप्रित नेपाल पसे धनगढी वा महेन्द्रनगरका होटलमा लुक्न सक्ने वा काठमाडौं, नुवाकोट अथवा ललितपुरका बस्तीहरूमा पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने महाभूकम्प गएका बेला बाबा रामरहिमले नेपालमा आफ्नो लिंक विकास गरेका छन् । हनिप्रितले रामरहिमको त्यही जनसम्पर्कलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कतिपय त नेपालको तराईका सीमावर्ती गाउँहरूमा लुक्न सहज हुने भएकाले हनिप्रित त्यही लुक्न सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताउँछन् ।
केही समय पहिले दिल्लीको किड्नी काण्डमा परेका एक डाक्टर यसरी नै त्यहाँबाट फरार भै नेपाल आएका थिए । टेलिभिजन स्क्रिनहरूमा छाएका ती डाक्टरपछि चितवनको एक होटलबाट पक्राउ परे । अहिले हनिप्रितका सन्दर्भमा पनि त्यही घटना दोहोरिन सक्ने अनुमान गर्नेहरूको पनि कमी छैन । त्यसो हो भने हनिप्रित चितवन वा पोखराका कुनै होटल–रिसोर्टमा लुकेर बसेकी हुन सक्छिन् वा उनले ती डाक्टरको गल्ती नदोहोर्‍याउन पनि सक्छिन् ।
यसरी भइन् गायब ?
रामरहिमलाई सुनरिया जेलमा पुर्‍याइएपछि जेलबाट हनिप्रितसँगै तीन जना निस्किएका थिए, जसमा सञ्जय चावला पनि थिए । सञ्जय तिनै व्यक्ति हुन्, जसले अन्तिम पटक हनिप्रितलाई देखेका थिए । हनिप्रित रामरहिमलाई जेलमा छाडेर सञ्जयसँगै आर्यनगर पुगेकी थिइन् । चावलाका अनुसार डेरासँग जोडिएका अन्य दुई व्यक्तिले हनिप्रितलाई आफ्नै घरबाट लिएर गएका थिए । ‘मलाई थाहा छैन, उनीहरू कहाँबाट आएका थिए, उनीहरू सिरसाकै बासिन्दा हुन्, जसमध्ये एकको नाम प्रदीप थियो, अर्कोलाई नन्दजी भनिन्थ्यो,’ चावलाले भनेका छन्, ‘त्यतिबेला रातको ११ देखि सवा ११ बजिसकेको थियो, त्यसपछि उनीहरू हिँडे ।’ उनले विपरीत दिशाबाट आएका इनोभा जस्ता ठूला गाडीमा उनीहरू चढेको देखेका थिए । त्यतिबेलादेखि नै हनिप्रितलगायत तिनै जना फरार छन् । भारतीय मिडियाहरूले ‘खराब समयमा छायाँले पनि साथ छोड्छ’ भन्ने भनाइ हनिप्रितले चरितार्थ गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘रामरहिमकी छायाँजस्तै लाग्ने हनिप्रित मनीको चक्करमा फरार छिन्,’ एबीपीले भनेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार हनिप्रितले आफू फरार हुनुअघि डेराका अनुयायीहरूको नाममा एउटा चिठी लेख्दै मेरो चिन्ता नलिनु, म आफ्नो माइती फतेहाबाद जान लागेकी छु भन्ने आशय समेत प्रकट गरेकी थिइन् ।
बाबाको फेभरेट लिस्टमा हनिप्रित ?
बाबा रामरहिमले जेल प्रशासनलाई भेटघाटका लागि टिपाएको फेबरेटहरूको लिस्टमा कथित धर्मपुत्री हनिप्रितको समेत नाम छ । जबकि उक्त सूचीमा उनले आफ्नी पत्नी हरजित कौरको नाम समेटेका छैनन् । यसले हनिप्रित र बाबा रामरहिमको सम्बन्धलाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।
कसरी नेपाल पस्न सक्छिन् ?
कैलाली र कंचनपुरसँग जोडिएको उत्तर प्रदेशको लखिमीपुर खिरी हुँदै गौरीफण्टा नाकाबाट हनप्रित नेपाल पुगेकी छिन्,’ भारतीय पत्रिका दैनिक जागरण, अमरउजाला आदिले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी भारतीय टेलीभिजन च्यानल आजतक, एबिपी तथा जी न्युजले पनि यो सामाचार प्रसारण गरेका थिए ।
कैलाली, कंचनपुर भारतको राजधानी दिल्लीबाट ३ सय ५० किलोमिटर दूरीमा रहेका खुला सिमाना भएका जिल्ला हुन् । भारतको उत्तराञ्चल तथा उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका दुवै जिल्लामा झन्डै २ दर्जन खुला नाका छन्, जसबाट सहज रुपमा भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन् । हरियाणा पनि दिल्लीसँगै जोडिएको हुनाले नेपाल आउन कैलाली–कञ्चनपुर नै उपयुक्त वाटो भएकाले हनिप्रितले यी नाका प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन् । हनिप्रित पनि यिनै नाकामध्ये कुनैलाइ प्रयोग गरी नेपाल छिरेकी हुन सक्छिन् । कैलाली कंचनपुरसँगै बर्दिया र बाँकेका खुला नाकाबाट पनि उनी नेपाल छिर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
भारतको लखिमपुर खिरीसँग जोडिएको बहराइच जिल्लाको नानपारा हुँदै नेपालगंज जान सहज भएकाले उक्त नाका समेत प्रयोग भएको हुन सक्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार हनिप्रित नेपाल नपुगेकी पनि हुन सक्छ । लखिमपुर खिरीसँगै भारतको नानकमत्ता, पिलिभित आदि क्षेत्रमा पनि डेरा सच्चा सौदाका लाखौं भक्त भएकाले उनी लखिमपुर खिरी हुँदै ती क्षेत्रमा पुगेर लुकेकी हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
मुख्यतया कंचनपुरको वनवासा, ब्रह्मदेव, दोधारा चाँदनी, कुतीयाकवर, बैलौरी खजुरीया, पुनर्वासको गोविन्दनगर आदि नाकाबाट सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न सकिन्छ । यसैगरी कैलालीको गौरीफन्टा, रतनपुर, पवेरा, हसुलीया, पृथ्वीपुर, थापापुर, भजनी, खक्रौला नाकाबाट पनि सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना छ । यी नाकाबाट हरेक दिन सयौंले आवतजावत गर्ने भएकाले को कति वेला नेपाल आयो यकिन गर्न गार्‍हो हुन्छ ।
कैलालीका प्रहरी प्रमुख अर्जुन चन्द भन्छन्, ‘पूर्वसूचना भए मात्र निगरानी हुने हो अन्यथा हरेक दिन सयौं भारतीय नागरिक नेपाल आउने भएकाले यस विषयमा केही भन्न सकिँदैन ।’ सीमा क्षेत्रबाट भारतीय प्रहरीले अनुरोध गरेपछि खोजबिन हुनसक्छ अन्यथा हनिप्रितलाई खोजतलास गर्ने कुनै कारण नभएको चन्दले बताए । ‘चारैतिरका नाका खुला छन् जुन नाकाबाट नेपाल आएपनि कसरी जानकारी हुन्छ ?,’ चन्दले प्रतिप्रश्न गरे ।
भारतीय नम्बर प्लेटका सयौं सवारी साधन दैनिक यी नाका भएर नेपाल आउजाउ गर्छन् । स्थानीय नाकामा ४० रुपैयाँको पर्चि काटेपछि भारतीय नम्बरप्लेटका सवारी साधन नेपाल आउन सक्ने भएकाले पनि हनिप्रित नेपाल छिर्नु कुनै ठूलो कुरा नभएको नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।